Shiinaha Slag soosaarayaasha toosan iyo kuwa alaabada siiya | BBMG
Dhulka jeexjeexa ee rullaluistemadka ku shiidaya qalabka wax lagu shiidayo wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: qayb yar oo ka mid ah slag cusub oo biyo badani ku jiraan iyo inta badan dhulka aan dhammaysnayn oo leh biyo hoose. Qeybtaan ka mid ah slag aan dhammeyn waa sheyga qalafsan ee la soo celiyo ka dib kala soocida kala-soocayaasha sababtoo ah qaybaha waaweyn Dabaysha cadaadiska xun ee diidmada ahi waxay sababtay in laba qaybood oo slag ah ay ku dhacaan saxanka wax shiidaya.
Marka la eego ficilka xoogga centrifugal, slag-ga waxaa lagu hagaa hayaa rullaluistemadka shiidista kaabayaasha ah, slag-ga ayaa la is-dulfuulayaa iyadoo la yareynayo garaaca mashiinka wax lagu shiido ee kaabaya. Rullaluistemka shiilista kaaliyaha ah ayaa masaafo cayiman ka fog mashiinka wax shiidaya, waxaana lagu hagaajiyaa gacanta dhagaxa oo leh miisaan aad u fudud.
Rullaluistemadka wax shiida ee ugu weyn ayaa lagu hagaajiyaa gacanta dhagaxa weyn ee weyn, iyo lakabka maaddada la qaabeeyey waa dhulka iyadoo lagu shiidayo cadaadis. Xooggu wuxuu ka dhashaa culeyska rullaluistemadka shiida laftiisa iyo cadaadiska nidaamka Haydarooliga.
Mashiinka wax lagu shiido wuxuu ku wareegaa isagoo xoqaya sariirta xoqan. Qalabka dareeraha iyo xaddidaadda keydka ee lagu rakibay gacanta dhagaxa ayaa ka hortagi kara taabashada biraha tooska ah ee u dhexeeya rullaluistemadka wax shiidaya iyo qalabka wax lagu shiidayo.
Qaybaha dhulka hoostiisa ku yaal waxaa soo tuuraya xoogga bartamaha waxayna ku qulqulayaan giraanta haynta. Halkan waxaa lagu qabtaa qulqulka hawada ee ka soo baxaya giraanta dabaysha, iyo boodhka iyo gaaska qulqulaya qolka shiidaya, sidaa darteed waxay ku wareegsan tahay dhululubo toosan oo wax lagu shiido oo lagu qalabeeyo dahaadh u adkaysi u leh galka iyo kala-sooca budada. Kalasooca budada ayaa lagu rakibay ama lagu dhajiyay foostada toosan.
Iyadoo aan laga helin caawimaadda gudbinta kaabayaasha, qalabka tooska ah ee tooska ah ayaa si toos ah loo buuxin karaa oo loo bilaabi karaa mootada weyn iyadoo la raacayo xaaladda rarka (ka dib xiritaanka gaaban). Si loo soo dejiyo matoorka ugu weyn, rullaluistemadka shiidan ayaa si hayd ah kor loogu qaadayaa si loo yareeyo cadaadiska nidaamka Haydarooliga. Saliida waxaa lagu soo bandhigi karaa godka bilaa rodka ah ee dhululubo haydarooliga ah.
QAADASHADA DISC DIAMETERKA
Hore: Shiidi rullaluistemadka
Xiga: Dhuxul toosan
Mashiinnada toosan ee Slag ah